Asolwa ngokubulala iphoyisa lenkosi amasosha - Ilanga News
Home Izindaba Asolwa ngokubulala iphoyisa lenkosi amasosha
Asolwa ngokubulala iphoyisa lenkosi amasosha
Kuthiwa alishaye alishiya khona lapho lilimele kanzima
UMNU Frank Lushaba okusolwa amasosha ngokuthi amshaye waze washona ngoMgqibelo ebusuku ngemuva kokumthola ehamba
emgwaqweni edle amanzi amponjwana.
SISHIYE izibazi ezinhliziyweni zomndeni wephoyisa lenkosi Khethukuthula Makhanya eMbumbulu isenzo samasosha namaphoyisa okuthiwa alishaye lashona ngoMgqibelo ebusuku emuva kokuhlangana nalo lidle amanzi amponjwana.
Umndeni kaMnu Frank Lushaba (64) waseZwelisha, ngaseFolweni, uthi ufuna ubulungiswa ngokubulawa kwakhe ngesihluku. Ngokuthola kweLANGA ngendodana kamufi, uMnu Sphelele Lushaba, uyise wehlelwe yilo mshophi nje, ubesendleleni egoduka ephuma komunye umuzi ophesheya kwakubo kade esebenza kuwona.
“Sizwe sesibizwa ngomakhelwane besitshela ukuthi ubaba useshaywe ngamasosha, ulele emgwaqweni. Kuthiwa amfice ehamba emgwaqweni ephethe induku yakhe yonogada ajwayele ukuyiphatha njengoba eyiphoyisa lenkosi.
“amngenele ngesibhaxu embuza ukuthi ufunani emgwaqweni ebusuku, emsola nangokuthi uphuzile,” kusho uMnu Lushaba.
Uthi bafike endaweni yesigameko amasosha engasabonwa, emshiye ebona ukuthi ulimele kanzima, angamzamela ngisho usizo. “Sithole ngamalungu omphakathi azibonele lesi sigameko ukuthi la masosha abeseshaya kwasani oluhamba emgwaqweni.
“Kuthiwa ubaba uzamile ukuwachazela ukuthi uphuma ukuyosebenza, useyagoduka, kodwa angakulalela konke lokho. Sifike esaphefumula kodwa engasakhulumi.
“Ubeshaywe kanzima ekhanda. Simphuthumise esibhedlela ePrince Mshiyeni, okuyilapho efike washonela khona,” kusho uMnu lushaba.
Uthi uyise ubengumuntu owaziwayo futhi obehlonishwa endaweni njengoba ebeyiphoyisa lenkosi. Uthi bewumndeni kuyabadumaza ukuthi amasosha asengaze ashaye alimaze umuntu omdala ajike amshiye kanjalo elele emgwaqweni angamsizi.
“Siyafisa ukuthi umthetho wenze okufanele, kwenziwe ubulungiswa la masosha enze le nto ajeze. Le nto besihlale siyibona komabonakude amasosha ehlukumeza abantu,” kusho yena.
Ibamba lomkhulumeli we-Independent Police Investigative Directorate (IPID), uMnu Sontonga Seisa, ukuqinisekisile ukuthi likhona icala elivuliwe, benza uphenyo.
Previous articleIseluleko seDowns kubaphathi bePSL
Next articleKuvalwe umtholampilo ‘ngenxa ye-corona’